Tsamba template: kukumbira mubhadharo wezororo rako risingabhadharwe
Yakatumirwa ne Tranquillus | Nov 26, 2020 | Kunyora uye kunyora unyanzvi hwokukurukura
Unoda a tsamba template kuti utore muripo wezororo rako usati warasika? Heano mienzaniso miviri yakajairika yaunowana inobatsira mukukumbira kubhadhara. Kusiya chikamu chekodzero dzako. Mutemo unonyora mhando dzakasiyana dzekuzorora dzinogona kutorwa zvichienderana nemamiriro ezvinhu. Nguva idzi dzekusaita basa dzimwe nguva dzakarongwa nekarenda chaiyo. Zvingave zvisingagoneki iwe nemushandirwi wako chero chikonzero. Kutora zororo rako rese pamazuva akapihwa muchimiro chako. Nzira yekukumbira kubhadharwa kwezororo rake rakabhadharwa risina kutorwa?
Zvinoenderana nechinyorwa L. 3141-3 yeLabhodhi Codel, chero mushandi, zvisinei nehukuru hwavo, kondirakiti kana chinzvimbo. Inotumirwa mazuva 2,5 ezororo rakabhadharwa pamwedzi webasa. Iko kuverenga kunoenderana nepfungwa yeinonzi inguva chaiyo, iyo inoratidza nguva iyo mushandi anowanikwa kune waanoshandira kubasa.
Mamwe mashizha kana kusavapo zvinofungidzirwawo. Semuenzaniso, zororo revabereki kana rekurera, zvimisikidzwa zvine chekuita nechirwere chepamabasa kana tsaona yebasa, kudzidziswa basa. Zvirongwa zvechibvumirano zvinogona kupa mamwe mazororo akabhadharwa.
Ungatora sei zororo rakabhadharwa?
Zororo rinobhadharwa rinowanikwa zviri pamutemo panguva yekutarisa, kubva munaJune 1 wegore rapfuura kusvika Chivabvu 31 wegore razvino, kunze kwekunge zvakabvumiranwa neimwe nzira, kuregererwa kana kubvumidzwa. Sekureva kweChinyorwa L. 3141-12 cheLabour Code, zororo rinogona kutorwa pakubatira. Ivo vanofanirwa kuiswa zvinoenderana nemitemo yekumisikidza iri kushanda mukambani yako.
Chii chinoitika kuzororo rinobhadharwa risina kutorwa?
Pamwechete, kana mushandi asina kutora zororo rese rakabhadharwa raakange aine kodzero naro panguva yekutariswa, izvi zvinobva zvarasika. Iye haagone kuatakura achiaendesa kune inotevera mareferenzi nguva. Nekudaro, mutemo unobvumidza iwo muchiitiko chekuti chibvumirano kana kushandiswa mukambani kuri kushanda. Izvi zvinoshandawo kana kusendekwa kuchitevera zororo revabereki kana rekutora. Zvakare kana zviitiko zvekushaikwa kwemushandi zvichitevera chirwere chebasa kana tsaona yebasa.
VERENGA Iwe unodzivirira sei zviperengo zvikanganiso pabasa?
Nezve zororo rekurwara, ingave nyanzvi kana zita. Izvo zvinokanganisa kudzoserwa kwezororo rako. Kana zviitiko zvikaitika pasati pazororo, hazvizorasika. Mushandi anozokwanisa kubatsirwa nekumbomiswa kwavo, mushure mezuva rekutangazve basa. Kune rimwe divi, kana hurwere kana tsaona ikaitika panguva yezororo rakabhadharwa, mushandi haazowani kuwedzerwa, kunze kwekunge paine chibvumirano kana chibvumirano chakabatana icho chinopa icho.
Kana kumisikidzwa kwezororo rakabhadharwa zvisingaite, zvinobva zvarasika. Kunze kwekunge izvi zvisingaiti zvichibva mukukanganisa kwemushandirwi. Saka nekudaro, iyo yekupedzisira inofanirwa kubhadhara mushandi.
Chikumbiro chekubhadharwa kwezororo rakabhadharwa hachina kutorwa
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, mushandi aisakwanisa kunakidzwa nezororo rake rese raakabhadhara. Izvi ndizvo zvinoitika kana mushandirwi akaramba rubatsiro nekuda kwebasa rakawandisa kana kana vanhu vakati wandei vachida kuenda pamazuva mamwe chete. Mushandi saka anozokwanisa kukumbira waanoshandira kuti amubhadhare nekubhadhara muripo wezororo rakabhadharwa.
Iyi futi inyaya yekutyora chibvumirano, kungave kuri kusiya basa, kudzinga basa, kumisa chibvumirano kana kuenda pamudyandigere. Mushandi anogashira, zororo rakabhadharwa risina kutorwa pazuva rekukanzurwa, mari yekubhadhara yakamisikidzwa zvinoenderana nechinyorwa L3141-28 cheLabour Code.
Kana iwe uchikodzera kune imwe yeiyi mvumo, asi iwe hauna kugashira chero chinhu. Zvinobatsira kuyeuchidza waunoshandira nezvekodzero dzako. Ichi chikumbiro hachisi pasi pechero chimiro. Asi usati wapindira nemuromo kana neposvo. Tarisa zvibvumirano zvinoshanda mukambani yako.
Tsamba yemuenzaniso inokumbira kubhadharwa kwezororo risingabhadharwe
Musoro: Kukumbira muripo wezororo rakabhadharwa hauna kutorwa
Mushandi mukambani yedu se [basa] kubvira [zuva], ndakutumira, sezvakabvumiranwa, chikumbiro chezororo rakabhadharwa na tsamba kwenguva kubva pa[date] kusvika [date].
Pakutanga, iwe wakaramba kuenda kwangu pazororo nekuda kwekuremerwa nebasa panguva iyoyo. Zororo rangu saka rakamiswa pamberi pako. Izvo zviitiko mukati mekambani hazvina kumira kukura ipapo. Nguva yekureva iri kusvika kumagumo ndisina kuwana mukana wekuenda zvangu.
Mushure mekubvunza payslip yangu yekupedzisira, ndakaona kuti mazuva ano ezororo rakabhadharwa asina kutorwa aisave chikamu chezviyero zvangu. Nekudaro, ini ndinokuyeuchidza iwe kuti nyaya yemutemo inopa mushandi mvumo yekubatsirwa kubva kune yemubhadharo mvumo uye izvi kana mamiriro acho ari akakodzera kumushandirwi.
Naizvozvo, ndinogona kufara kana iwe ukakwanisa kupindira kuti ini ndibhadhare huwandu hwenhepfenyuro inoenderana ne [nhamba] mazuva ezororo andisina kukwanisa kutora. Kana zvirinani ndiunzire kumwe kujekeserwa pane mamiriro ezvinhu kana ndikakanganisa kubva kwandiri.
Tichifunga nezvekutarisisa kwako, ndapota bvuma, Changamire, kwaziso dzangu dzechokwadi.
Muenzaniso wekukumbira kubhadharwa kwezororo rakabhadharwa risina kutorwa mushure mekumiswa kwechibvumirano
Musoro: Chikumbiro chekubhadhara muripo wezororo rakabhadharwa
Ini nekudaro ndinoteedzera kuenzanisirwa kwechiyero changu chechero account inokonzerwa nekumiswa kwechibvumirano chebasa chakatisunga nekuda kwekusiya basa / kudzingwa kwangu /, nezvimwe.
Saka nekudaro, wakanditumira pepa rangu rekupedzisira. Asi mushure mekubvunza, ndakaona kuti haina kutaura nezve muripo wezororo rakabhadharwa.
Zvisinei, nyaya yemutemo inotaura muchikamu L 223-14 cheLabour Code kuti "kana chibvumirano chebasa chakamiswa mushandi asati akwanisa kubatsirwa nezororo rose raakange ave nekodzero, anotambira chidimbu chezororo kubva kwaasina kubatsirwa, muripo unoripa… ”, kureva kwandiri, zvakaenzana nemazuva [nhamba] pandakasiya kambani.
Saka ndinoda kukutendai nekundibhadharira mari yandakakweretwa ini nekukurumidza. Ndinodawo mumwe munhu kuti anditumire nyowani yakagadziriswa payslip.
Panguva ino, ndokumbira ubvume, Madam, iko kutaura kwekunzwa kwangu kwakasarudzika.
Dhawunirodha "Muenzaniso wetsamba yekukumbira kubhadharwa kwezororo rakabhadharwa risina kutorwa"	muenzaniso-wetsamba-kukumbira-kubhadhara-mashizha-abhadharwa-asina kutorwa.docx - Yakadhaunirodha ka610 - 13 KB
VERENGA Kukosha kwemashoko ekunyora mune imwe nyanzvi yeemail
Dhawunirodha "Muenzaniso-wekukumbira-kubhadhara-kwe-kubhadharwa-siya-kwete-kutorwa-mushure mekutyora chibvumirano.docx"	Semuenzaniso-wekukumbira-kubhadhara-kwebhadharirwa-mashizha-asina-kutorwa-mushure-kutyora-kwechibvumirano.docx - Yakadzoserwa ka5174 - 20 Kb
Tsamba template: kukumbira mubhadharo wezororo rako risingabhadharwe Kukadzi 13, 2022Tranquillus
pashureKudzingwa nekuda kwezvikonzero zvehupfumi: kukanganisa kwemushandirwi kutyisidzira kukwikwidza kwekambani
zvinoteveraYemahara Shopify: Iyo Dashibhodhi
Nzira yekukudziridza sei simba rekutenda?
Iyo email inosiya nekukurumidza inogona kuve ine njodzi email kune munyori wayo
Maitiro ekunyora uye nzira dzekuverenga